Daawo :- Masas noocyo kala duwan leh oo dalka Philippin dadka Massage u sameeya | shumis.net
Home » galmada » Daawo :- Masas noocyo kala duwan leh oo dalka Philippin dadka Massage u sameeya
Daawo :- Masas noocyo kala duwan leh oo dalka Philippin dadka Massage u sameeya
Dalal badan oo ka tirsan qaarada Aasiya ayaa si weyn looga isticmaala in Masaska noocyadooda kala duwan ay kuu sameeyaan Massage ama daldaliig sida aad ka aragtaan muuqaalkaan ka kooban sawirada iyo video-ga.
Dalka Philippin xero lagu xannaaneeyo xayawaanka ayaa qeyb ka mid ah waxaa ka heleysaa adeeg massage ay kuu sameynayaan noocyo kala duwan oo masaska halista badan, laakiin aan wax dhibaato ah geysaneyn.
Sida ka muuqada muuqaaladaani waa laba mas oo midi uu yahay nooca loo yaqaan Jabisada oo dherirkeedu yahay 5.5 mitir, culeyskeeduna yahay 250 kilograms ayaa isku duub duubtay gabadh yar oo ardayad ah, si ay ugu sameeyaan massage.
Qeyabta hoose kaga boggo sawiradda iyo muuqaalka warbixintaan.
Title: Daawo :- Masas noocyo kala duwan leh oo dalka Philippin dadka Massage u sameeya